नगरपालिका उपप्रमुख र वडाध्यक्षबीच ‘अनैतिक सम्बन्ध’:रंगेहात फेलापरेर श्रीमानले गरे कुटपिट - Taja Report
Homeसमाचारनगरपालिका उपप्रमुख र वडाध्यक्षबीच ‘अनैतिक सम्बन्ध’:रंगेहात फेलापरेर श्रीमानले गरे कुटपिट
August 31, 2018 समाचार Comments Off on नगरपालिका उपप्रमुख र वडाध्यक्षबीच ‘अनैतिक सम्बन्ध’:रंगेहात फेलापरेर श्रीमानले गरे कुटपिट
काठमाडौ । वडाध्यक्षसँग अनैतिक सम्बन्ध राखिरहेका बेला रंगेहात फेलापरेको भन्दै उदयपुरको बेलका नगरपालिकाकी उपप्रमुख राजकुमारी चौधरी आफ्नै श्रीमानबाट कुटिएकी छन् । बेलका नगरपालिका ४ का अध्यक्ष दीपक दंगालसँग उपप्रमुख चौधरी बन्द कोठामा आपत्तिजनक अवस्थामा भेटिएको भन्दै श्रीमान् शिवराम चौधरीले कुटपिट गरेका हुन् ।
वडा नम्बर १ घर भएकी उपप्रमुख चौधरी, वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष दंगालसँग आपत्तिजनक अवस्थामा भेटिएको भन्दै मादक पदार्थ सेवन गरी कुटपिट गरेको पाइएपछि प्रहरीले शिवरामलार्इ नियन्त्रणमा लिएको छ । उपप्रमुख कुटिएको खबर पाएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय बेलकाले शिवराम चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
मादक पदार्थ सेवन गरेको–नगरेको प्रमाणित गर्न शिवरामलाई अहिले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल लगिएको प्रहरी निरीक्षक नवीन सिंहले जानकारी दिए । प्रहरीले उपप्रमुख कुटिएपछि शिवरामलाई आवश्यक अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको जनाएको छ । स्थानीयले भने उपप्रमुख चौधरी र वडाध्यक्ष दंगालबीच पहिलेदेखि नै सम्बन्ध रहेको बताएका छन् ।
वडाध्यक्ष दंगालले भने नगर प्रमुख दुर्गाकुमार थापा कामको शिलशिलामा बाहिर गएको र आफूलार्इ कार्यभार सुम्पिएकाले कार्यालयकै कामका लागि उपप्रमुखलार्इ भेट्न गएको दाबी गरे । बिनाआधार उपप्रमुखका श्रीमान मदिरा सेवन गरी कुटपिटमा उत्रिएको वडाध्यक्ष दंगालको आरोप छ ।
३ करोड नेपालीलाई खुशिको खबर : नेपाल विश्वकै सुन्दर देशको पहिलो स्थानमा, भारत सूचीमै परेन (फोटो फिचर) (1,500)
कम्तीमा पचास जनालाई शेयर गरि आफु पनि स्वास्थ्य वनौ र अरूलाई पनि स्वास्थ्य बन्न प्रेरित गरौ,… (387)
न खान पर्छ न पीउन नै, यी दुई पातले जरैदेखि हटाउँछ सुगर (मधुमेह)!, तर कसरी ? थाहापाऊनुहोस् (369)
जग्गा नापमान सम्बन्धि अत्यन्तै महत्वपूर्ण जानकारी तपाईंलाई छ ? यहाँ क्लिक गर्नुहोस (279)
के तपाईंले फर्सीको मुन्टो खाने गर्नु भएको छ भने , हेर्नुहोस् यस्तो हुन सक्छ ! पढेर शेयर गरौ!!! (146)
म सोच्थेँ बुवा लोभी भएर फाटेको जुत्ता लगाएको होलान् तर होइन रहेछ पैसा कमाउन गार्हो रहेछ (140)